Ibhulogi yezemidlalo edumile
Ungabuyela nini emdlalweni ngemva kokuhlinzwa kwe-gallbladder?
Isigaba: ithimba 0
Ungawuqala nini futhi umdlalo ngemuva kokususwa kwe-gallbladder? Ukuvivinya umzimba okuqinile okwengeziwe noma ukuzijwayeza kwezemidlalo akwelulekwa ngaphambi kwezinsuku eziyi-15 ngemuva kokuhlinzwa. Ukubuyisela kufanele kube...
Ungaqala kanjani kabusha ezemidlalo ngemuva kweminyaka emi-5?
Ungaqala kanjani kabusha ezemidlalo ngemuva kweminyaka emi-5 yokuyeka? Ukuqaliswa kabusha komsebenzi wezemidlalo kumele kuqhubekele phambili: kuyadingeka ukuqala ngemisebenzi ethambile (ukugibela ibhayisikili, ukuhamba), cishe...
Ungawuqala kanjani umdlalo ngobumnene futhi?
Ungaqala kanjani kabusha ezemidlalo ngaphandle kokuzilimaza? Ukwenza izinqumo ezinhle nokuqala kabusha umsebenzi wezemidlalo kuyinto enhle. Kodwa ukugcina ijubane...
Ungawuqala kanjani kabusha umdlalo ngemuva kwezinyanga zokuyeka?
Ungawuqala kanjani kabusha umdlalo ngemuva kwenyanga? Hlanganisa ukuzivocavoca kwakho. Uma uya ejimini izikhathi ezi-3 ngesonto, isibonelo,…
Umbuzo: Kungani kunzima ukubuyela kwezemidlalo?
Ungawuqala kanjani umdlalo futhi? Ukuqalwa kabusha komsebenzi wezemidlalo kumele kuqhubekele phambili: kuyadingeka ukuthi uqale ngemisebenzi ethambile (ukugibela ibhayisikili, ukuhamba), cishe amahora ama-3...
Ungaqala kanjani kabusha ezemidlalo ngemuva kwezinyanga ezi-3 zokuphumula?
Indlela yokwenza ukuphumula okuhle kwezemidlalo? Ukuze uthole ukunakekelwa ngokomzimba ungenza kahle izikhathi ezincane zemizuzu engu-15 nsuku zonke. Uma u…
Ungaqala kanjani kabusha ezemidlalo ngemuva kwekhefu elide?
Ungawuqala kanjani kabusha umdlalo ngemuva kwesikhathi eside sokungasebenzi komzimba? Nawa amathiphu ayishumi angakuqondisa. Zibuze imibuzo efanele ngaphambi kokuthi uqale. … Yenza…
Ungaqala kanjani kabusha ezemidlalo ngemuva kwezinyanga ezi-2 zokuphumula?
Ungawuqala kanjani kabusha umdlalo ngemuva kokuphumula kwenyanga engu-1? Isibonelo, uma ungumdlali webhola likanobhutshuzwayo, gwema ukuqala ngokuqondile ngomdlalo (umfutho), hlela izikhathi zokuqeqesha ezimbalwa...
Indlela yokugwema ubuhlungu ngemva komdlalo?
Ungabi kanjani ubuhlungu ngemva komdlalo? Amathiphu angu-7 okugwema izinhlungu ngemva komdlalo Zifudumeze ngaphambi kokuqeqeshwa. … Hlaba imisipha yakho, ngaphambi nangemuva...
Indlela yokumisa ubuhlungu ngemva kokuzivocavoca?
Indlela yokugwema ubuhlungu ngemva komdlalo? Amathiphu angu-7 okugwema izinhlungu ngemva komdlalo Zifudumeze ngaphambi kokuqeqeshwa. … Hlaba imisipha yakho, ngaphambi...
1 2 ... 2,297 Olandelayo
Igama lami ngingu-Alan. Siyakwamukela kubhulogi yami yezemidlalo. Lapha umfundi uzothola izindaba zakamuva zezemidlalo, ukubuyekezwa kokuncintisana, izingxoxo zabasubathi, ubuqhawe bomhlaba kanye neYurophu. Ibhola, ihokhi yeqhwa, ibasketball kanye neminye imiqhudelwano yezemidlalo.
Umbuzo ovame ukubuzwa: Ubani ophumelele ebholeni lombhoxo?
Ungabamba kanjani iqhaza kuChampions League?
Impendulo engcono kakhulu: Ungangena kanjani esikhungweni sokuqeqesha umbhoxo?
Ungaba kanjani umdlali omuhle webhola?
Umbuzo Ovame ​​Ukubuzwa: Ungabuyekeza kanjani imidlalo yakudala yebhola?
Isebenza kanjani i-Hockey Playoff Rankings?
Ungakhuli kanjani amathanga ngenkathi udlala imidlalo?
Oxhumana nabo | À iziphakamiso | Ubumfihlo kanye nenqubomgomo yekhukhi
QAPHELA ABAPHATHI BAMALUNGELO! Zonke izinto ezisetshenziswayo zifakwa esizeni ngokwezinjongo zokwazisa nezokufundisa! Uma ukholwa ukuthi ukuthumela noma yikuphi okubalulekile kwephula ilungelo lakho lobunikazi, qiniseka ukuthi usithinta ngefomu lokuxhumana futhi izinto zakho zizosuswa!